Second Language | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခဲ့ရပုံတွေ ပြောပြချင်သေးတယ်။
အမေက လက်ထဲ ပိုက်ဆံမရှိရင် ကိုယ့်ကလေးတွေကို စာ ဖိသင်တော့တာပဲ လို့ ပြောလေ့ရှိတတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဖေတို့အမေတို့ ပေးနိုင်တာ ပညာအမွေပဲ ရှိလို့ပါ တဲ့။ ရုန်းကန်ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို စာသင်ပေးရင်း အားတင်းယူပုံရပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ကလေးဘဝ အတန်းကျောင်းမတက်ခင်ကတည်းက တီချယ် တီနာအုန်း သင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းကို အမေကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့၊ လိုက်စောင့်တာပါ။ ကိုယ်ကလဲ အင်္ဂလိပ်စကား နားယဉ်လွယ်ပုံများ ဂွဒ်တမောနင်း လို့ အသံထွက်နေလို့ နေကုန် ဒီတကြောင်းပဲ သင်နေရတာမျိုး။ အဲဒီတုန်းက အခုလိုလဲ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျောင်းတွေ မများသေးဘူး၊ အတော်ရှားတယ်။
မူကြို အမေ့ကျောင်းမှာလဲ အင်္ဂလိပ်ကပြား ဂါဝန်ဝတ် ဗိုလ်မကြီးက စန္ဒယားတီးပြီး အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ သင်ပေးခဲ့သေးတယ်။ ကိုယ်ကလဲ သီချင်းလေးတွေကို အမူအရာနဲ့ ကိုယ်လေးယိမ်းပြီး လိုက်ဆို လိုက်လုပ်တတ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတော့ ၀ါးနေတာမျိုး။ ပါးစပ်လှုပ်ပြီး အိယောင်ဝါးလုပ်နေတာ။ တခါတလေ တီချယ်ကြီး ဘာတွေ ဆိုနေပါလိမ့်လို့ သူ့ပါးစပ်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေသေးတာလေ။ သီချင်းတွေက လွတ်ကုန်ပါပေါ့။
အဖေတို့ အမေတို့က အင်္ဂလိပ်စာကို တော်စေချင်တာမို့ ကျောင်းမှာလဲ သင်၊ အိမ်မှာလဲ သင်။ ၈တန်း ၉တန်းရောက်တော့ ဗြုန်းဆို မြန်မာစာမှ အပ အားလုံး အင်္ဂလိပ်လို သင်ရမယ် ဖြစ်တော့ ဂွကျပြီ။ ဂွကျတာ ကိုယ်မဟုတ်၊ ကိုယ်က စာမလိုက်နိုင်လဲ အေးအေးပဲ၊ မပူဘူး။ ပူတာက အမေတို့ အမတို့။
အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာ ပိုလိုအပ်တယ် ဖြစ်လာတယ်။ ဆယ်တန်းမှာ ကမ္ဘာကျော် ၀တ္ထုကြီး Wuthering Heights တို့ သင်ရမယ်ဆိုတော့ ခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုး။ ဇာတ်လမ်းနားလည်အောင် Wuthering Heights ရုပ်ရှင်တွေပါ အခွေ ငှားကြည့်ရသေးတယ်။ ဆရာ ဦးစိုင်းအောင်ဝင်းတို့ ဆရာ ဦးသာနိုးတို့ဆီမှာ တက်ရတယ်။
ကိုယ်တို့တုန်းက ဆရာ ဦးသာနိုးက ၈တန်း ၉တန်းသင်သေးတယ်။ တကယ်က ဆရာက Advanced Class တွေ ပဲ သင်ချင်တော့တာပါ။ ၈တန်း ၉တန်း ၁၀ တန်းကို ဖြုတ်ချင်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဖေက ချိုသင်းတို့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိတော့ သင်ပါအုံး ပြောထားလို့ စောင့်နေရတာ။ ကိုယ် ၉တန်းတက်တော့ ၈တန်းဖြုတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ် ၁၀တန်းရောက်တော့ ၉တန်း မသင်တော့ဘူး။ ကိုယ် ၁၀တန်းလဲ အောင်ရော ဆရာလဲ Advanced English ပဲ သင်တော့တာ ခုထိပဲ။
ကိုယ်က ငယ်ငယ်ကတည်းက မထူးချွန်ပါဘူး။ စာတော်တဲ့ ကျောင်းသူလဲ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ သူလို ငါလို မှန်တမ်းပဲ။ အခုလို အခြေအနေလေး ရောက်လာဖို့ မိဘတွေ အမတွေ ဆရာတွေက အင်မတန် ပံ့ပိုး၊ တွန်းတင်ခဲ့ရတာပါ။ အတန်းတိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူး ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့် ကြိုးစားမှုက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိမှာပဲ။
စာကို လိုချင်စိတ် နည်းရတဲ့အထဲ ကိုယ့်မှာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖို့ ဆိုဖို့ အတော် confidence နည်းတာပါ။ စာနဲ့ ရေး ဆိုရင်တော့ ပြောတာထက်စာရင် တော်လိမ့်အုံးမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ပြောရဲ ဆိုရဲဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်အဖို့တော့ လွယ်မလိုနဲ့ အတော်ခက်တာပါပဲ။
ကိုယ့် အမ အကြီးဆုံး မစံနဲ့ အမ အငယ် မနှင်းကတော့ စာမှာ ကြိုးစားချင်စိတ်လဲ ရှိတယ်။ သူတို့ကိုလဲ မိဘတွေက စာမလုပ်မှာ ပူမနေရပါဘူး။ မစံဆိုလဲ အကြီးပီပီ အငယ်တွေကို အမြဲ စာပြ ပေးနေတာ။ ကိုယ်သာ မဟုတ်၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေပါ သင်ပေးတတ်တယ်။ မနှင်းကတော့ ဆယ်တန်းနှစ်က တနိုင်ငံလုံးမှာ အင်္ဂလိပ်စာအမှတ်အများဆုံး ရတဲ့သူပဲ။
ဒီတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်အမအလတ် မအေးက ကြားမှာ လွတ်နေတယ် ပြောရမှာပေါ့။ နှစ်ယောက်စလုံး အရီသန်သူတွေ။ မိသားစုစကားဝိုင်းမှာ အမြဲ နောက်ရွှတ်ရွှတ် ဝင်ပြောလို့ တခါတလေ အဖေက “ထောင်တန်တဲ့စကား ရယ် ပေါ့ တဲ့၊ အဖေ ဆုံးမနေတယ်လေ သမီး” လို့ သတိပေးခံရသူတွေ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့ မအေး ကွာတာ ရှိသေးတယ်။ မအေးက အင်္ဂလိပ်လို ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဘရွတ် ရွှတ်တွ အကုန် လျှောက်ပြောတာပဲ။ ပြောရဲ ဆိုရဲ ရှိပြီး ကိုယ့်လို တွန့်ဆုတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ငယ်ငယ်က သူလျှောက်ပြောနေလို့ အိမ်မှာနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေက သူ့ကိုဆို အထင်တွေ ကြီးလို့။ သူကလဲ ငါ့ကိုတော့ အထင်တွေ big ကုန်ပြီတဲ့၊ ပြုံးစိစိနဲ့ သဘောကျနေတယ်။
နောက်ပြီးတော့ သူက ဟာသဥာဏ်လဲ ရွှင်သူဆိုတော့ သူ့ဖာသာသူလဲ အင်္ဂလိပ်စကားတွေ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ထားသေးတယ်။ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းတို့ လက်မှိုင်ချရမဲ့ အပေါက်ပေါ့။ ဥပမာလေး တခုစ နှစ်ခုစ ပြောပါရစေအုံး။ ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ အတူနေတဲ့ မမြင့်က ဘယ်တော့မှ အိမ်အလုပ်ထဲ စိတ်ဝင်စားတယ် မရှိတော့ အမြဲ အမှားမှားအယွင်းယွင်းပဲ။ ဈေးမှာတဲ့သူက သေချာမှာနေလဲ ပြုံးသာပြုံးနေတယ် မမှတ်မိဘူး။ စိတ်က တခြားရောက်နေတာမျိုး။ စိတ်လဲ သိပ်အမှန်ကြီး မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။
အဲဒါဆိုရင် မအေးက ၀င်ပြောတယ်။ သူ goat wind ဖြစ်နေပြီ တဲ့။ ကိုယ်လဲ သူဘာပြောလိုက်မှန်းမသိတော့ ပထမတော့ ကြောင်သွားတယ်။ နောက်မှ မအေးက ရှင်းပြတယ်။ goat ဆိုတော့ စိတ်၊ wind ဆိုတော့ လေ ၊ သူစိတ်လေနေပြီ၊ နင်ပြောတာ သူ စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ပြောတာ တဲ့။ ဘာသာပြန်ချက် ရက်စက်သယ် လို့ ပြောရမလိုပဲ။
တခါတလေ မမြင့် တခြားကောင်လေးတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုရင်တော့ မအေးက သတိပေးတယ်။ မမြင့် goat play ဖြစ်နေပြီဟေ့ တဲ့။ သူစိတ်ကစားနေပြီပေါ့၊ ပြဿနာတက်တော့မယ် သတိထား ဆိုတဲ့သဘော။ သူ အချက်ပေးပုံက အတော်တော့ ဟန်ကျတာပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ တကယ်တတ်တဲ့သူတောင် နားမလည် မျက်စိလည်သွားမှာပဲ။
ကိုယ်ကျတော့ တမျိုးပါ။ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာမတော်တာကို အကြောင်းပြပြီး ဗမာစကားပဲ ရေရေလည်လည် ပြောချင်သူပါ။ ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းကို ဗမာလို မပြောရရင် မရင်းနှီးလို့ ပြောသလို ခံစားရတယ်။ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်တော့ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ပြောကိုပြောရမှာ ဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာဆိုရင်တော့ သူဗမာလို နားလည်သေးသမျှ ဗမာလိုပဲ ပြောချင်မိတယ်။
ဒီကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုလဲ ဗမာလို မမေ့အောင် အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သူတို့နဲ့စကားပြောရင် ဗမာလိုပဲ ပြောဖြစ်တယ်။ တချို့ကလေးလေးတွေက သိပ်မပြောတတ်တော့ဘူး။ အဲဒါဆို ကိုယ့်ဘာသာစကားတခု မမေ့လျော့ သွားစေချင်တာမို့ သူ့တို့လေးတွေကို ဗမာလို ပြောဖို့ အမြဲအားပေးမိတယ်။
ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ မိဘက သင်ပေး၊ အိမ်မှာ ဗမာလို ပြောတာမို့ ဗမာလို နားလည်တယ်၊ ကြိုးစားလဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ တနေ့တော့ ဧည့်သည်လာလို့ ကလေးတွေက တံခါးဖွင့်ပေးတယ်။ ဧည့်သည်က မင်းတို့ အဖေ၊အမေရော လို့ မေးတော့ သားလုပ်သူက ဟိုနှစ်ကောင် နောက်ဖေးမှာ ထမင်းစားနေတယ် တဲ့။ သူတို့လဲ မမှားဘူး။ two guys ကို ၂ကောင် လို့ ပြောလိုက်တာလေ။ မိဘကို ကောင် နဲ့သုံးလိုက်တော့ ရီရခက် ငိုရခက်။
ကိုယ့်မှာလဲ မြန်မာအချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောမိတဲ့အချိန်တွေ ရှိတတ်သေးတယ်။ ဘယ်အချိန်တွေမှာလဲဆိုတော့ ကိုယ် စိတ်တိုတဲ့ အချိန်တွေမှာပါ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကျွဲမြီးတိုသလို ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘိုလို မှုတ်လိုက်တာပါ။ အများဆုံးပြောတဲ့ စကားက NO!!!! ပေါ့။ အပြောအခံရဆုံး သူကတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားပဲ ဆိုပါတော့။
သူကလဲ တချက်တချက် ကိုယ်ဘိုလိုပြောတာတွေကို အဆင့်နဲ့ခွဲပြီး သူ့ခေါင်းထဲမှာ မှတ်ထားတတ်တယ်။ သူက ကိုယ့်ကို အမြဲလိုလို စ နေတတ်တာမို့ ကိုယ်က စိတ်ရှုပ်လာရင် I hate you တခွန်း ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါဆို သူက ရီမောပြီး မနက်စောစောစီးစီး I hate you တလုံး ရသွားပြီ တဲ့။ I hate you ရတာများ ၀မ်းသာစရာလား။
I hate you so much ဆိုရင်တော့ ခုနကထက် နည်းနည်း ပိုပြင်းတဲ့သဘော။ so much ပါတယ်လေ။ I never love you ဆိုရင်တော့ အတော့်ကို စိတ်တိုင်းမကျလို့ ဖြစ်မယ် လို့ သူက ထင်တတ်တယ်။ ကိုယ်ပြန်ပြောတိုင်း သူက ရီနေတာပါပဲ။ စ တတ်သူများ ဒီလိုပဲ ထင်ပါရဲ့။ တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့လဲ သိနေလို့ ဖြစ်မယ်။
တနေ့ကတော့ ကိုယ်စာဖတ်နေတုန်း လိုက်စ နေတာနဲ့ ကောင်းကောင်း စာမဖတ်ရဘူး ဖြစ်နေတာ။ ဒါနဲ့ ဒေါသထွက်လာပြီး ကိုယ်လဲ တခွန်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။ I’m going to leave you တဲ့။ အဲဒီလို ပြောတော့ သူက တဟားဟားရီပြီး “ဟာ..အမြင့်ဆုံးကို ထုတ်သုံးလိုက်ပါလား” တဲ့။
သူပြောတာနဲ့ ကိုယ်လဲ သိုင်းဘိုးဘိုးကြီးလိုမျိုး အဆင့်တွေ ခွဲထားရမလို ဖြစ်နေပါပေါ့လေ။
NO!!!! = Yes
I hate you so much = I love you so much
I never love you = I never hate you
I’m going to leave you = I never leave you alone
မိုးချိူသင်းကeလို မွှတ်နေတာဘဲနော်။
29 Mar 09, 06:47 AM
သစ်နက်ဆူး: မမေ...မမိုးချိုကိုတွေ့ ရင်...အနှစ်၂၀ မဟုတ်ဘူး...ကြည့်လို့ ရပြီလို့ ပြောပေးပါ...။
အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်ဆင့်ကို မှတ်သားသွားပါတယ်။ :P
ကျနော်လည်း အခုတစ်လေ goat wind နေတယ်..
goat right အောင် မနည်းပြန်ကြိုးစားနေရတယ်..အမ..
တရုတ်မှာသိုင်းကျမ်း အဆင့်ဆင့် ရှိသလို
အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း သူအဆင့် နဲ့ သူ ပေါ့လေ..
ကျနော်လည်း အီ က မွတ်နေအောင်ကို ကောင်းတယ်..
စိတ်ပျက်ဖို့ ပါ...း)
တော်သေးတယ်.. ဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ ကြောက်နေတာ..။ ခုတော့ ချိုသင်းဆီကနေ တော်တော် တတ်သွားပြီ..။ အနည်းဆုံးတော့ ယောက်ျားနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့ ရပြီ။ အဲ.. ဒါပေမဲ့ သူနားမလည်ရင် ဘလိုလုပ်မလဲ.. :P
စကားလုံး အဆင့်တွေ ခွဲထားတာကို သေချာမှတ်ထားပါတယ်။ ကြုံလို့ အဲလို အသုံးခံရရင် ခွဲတတ်အောင်လို့။
ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရေးထားတဲ့ အထဲက ပါလာတဲ့စာကြောင်းကို ပြောပြဦးမယ်
Eat rope Become Pagoda တဲ့
ဟေး ဒီအဆင့်ဆင့်ကို ထုတ်သုံးရမယ်။ စိတ်တိုလာလို့ကတော့ နိနိလည်း i am going to leave you ပဲ ။ အမချိုသင်းစိတ်တိုရင် ချစ်စရာကောင်းလို့ ဖြစ်ရမယ် ကိုကိုကျော်က လိုက်စ နေတာလေ။ နွေရာသီအကူးအပြောင်းမှာ goat play နေလို့ အမရေ။ ဘယ်ရမလဲ လက်တွေ့သုံးကြည့်လိုက်တာပေါ့။
မချိုသင်းရယ်.. ကိုဝဏ္ဏကို ခုတုံးလုပ်ပြီး..အင်္ဂလိပ်စာ သင်မပေးပါနဲ့။ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေပါ့မယ်။ No လောက်ဆို တော်ရောပေါ့။း)
ဟုတ်တယ်- ကျမလဲ မြန်မာစကားတတ်သူခြင်း..ဘိုလို ပြောရတာ..တယ် အာမတွေ့ဘူး။ ဘေးမှာ နိုင်ငံခြားသား တယောက်ယောက်ရှိနေလို့ဆို တမျိုးလေ။
ကွန်ပျူတာ ပျက်သွားပြီ.. :(
ဘုရားဘုရား အမရယ် ကီဘုတ်ကြီးကိုများ လူနဲ့ တက်ဖိမိတာလား..
အမလေး ရေးရင်းနဲ့ ကိုကျော်ပါ ပျက်သွားမှာ စိုးနေမိတယ် တက်ဖိမိလို့
(Just kidding, you can delete it.)
Say I will break your neck next time... :)
May be later. ... :)
if possible, create one english blog.... I sure confidence that your write english is very good although u said ur english is poor....
ဟိုက ပြုံးပြုံးကြီးနေတော့ ဘိုလို တစ်ခွန်းပြီးတစ်ခွန်း စတိုင်း ပြောရက်ပြီပေါ့ :D
အန်တီMCT က ဘလော့ပေါ်မှာတော့ အိမ်ဦးနတ်ကို အနိုင်ပိုင်းလိုက်တာချည်းပဲနော် :P
29 Mar 09, 01:02 PM
ုkom: ပျက်မှဖြင့်ဝင်လို့တောင် မရတော့ဘူးပေါ့.
29 Mar 09, 01:01 PM
ုkom: ကျွန်တော် အိပ်နေပါပြီခင်ဗျား လို့ပြောနေသလိုဘဲ။
ုkom: ကွန်ပြူတာပျက်သွာြးီ့ပိလို့လည်း သတင်းပေးနိုင်သေးတယ။်
29 Mar 09, 01:00 PM
ဘွိုင်း: လုပ်လိုက်တယ်တဲ့.. အစ်မမိုးချိုသင်းတို့များ။ ဟအယ်...
ဘွိုင်း: ပျက်မှာပေါ့. ဗီုင်းရပ်စ်တွေ့လို့ အန်တီဗိုင်းရပ်စ်က အလမ်းမ် ပေးတာကို အန်တီဗီုင်းရပ်စ်ကို အန်အင်စတောလ်
အစ်မရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ရတိုင်း
အမြင့်ဆုံးတွေ သုံးတဲ့အခါ သတိတော့ထားပါ။ တော်ကြာ.. ချစ်ချစ်က အသစ်ရှာသွားပါအုံးမယ်။
မအေးရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်တွေက တကယ်လည်တယ်... အမသာ ရှင်းပြချက် မထုတ်ရင်တော့ ဆိတ်လေ ဆိုပြီး ကြိုစဉ်းစားနေတာ... မီယာလည်း စိတ်တိုရင် ယောကျာ်းကို ဘိုလိုမှုတ်တယ်... ကွာရှင်းခွင့်ပေး လို့ပြောတာလေ ကော်ဖီမသောက်ရလို့ :P
ကွန်ပြူတာ ပြင်တတ်တဲ့ အသိတွေ မရှိဘူးလား အမ... စုံစမ်းပေးရမလား
ခေါင်းစဉ်က..goat wind day တဲ့
ကျနော့် မိဘတွေက သူတို့ မကြိုက်တာလုပ်လို့အမွေထပ်ဖြတ်ချင်ဖြတ်ပေ့ စေ...
မမိုးဆီမှာဘဲ အဝေးသင် အင်္ဂလိပ်စာ တက်တော့မယ်...။
ချစ်ကြတာတွေ.. အရမ်း ထုတ်.. ထုတ် မပြောနဲ့ လေ..
အပျိုကြီးလေးတွေ.. စိတ်ညစ်နေရမယ်..း)
အစ်မ MCT ဆီ သင်တန်းလာတက်တာ ၊၊ နောက်တောင်ကျနေပီ ၊၊
အဲ့လို second language တွေက ဟိုးတုန်းကတည်းက ရှိခဲ့တာကိုးနော်။ ငယ်ငယ်ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေ နောက်ပြီး ပြောတတ်ကြသေးတယ်။
Is From Is Get Air Ginger ( ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်း )
Three Shadow Never Know ( အရိပ်သုံးပါး နားမလည် )
မိုး လည်း စိတ်တိုရင် I hate you လို့ပြောနေကျ။ သူက စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ဟုတ်လို့ လားတဲ့ လာစ နေသေး။
goat wind ကိုတော့အရမ်းသဘောကျတယ်..
အမနဲ့အမအမျိုးသားကရယ်ရတယ်။ ချစ်လဲချစ်ကြမယ့် ပုံပဲ။ အင်းပေါ့လေ field ဆင်းတာပဲခူးတောင် လိုက်နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုမှတော့။ :P
ညီမလည်းလေ မြန်မာအချင်းချင်းဆို အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာ အရသာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ (အမှန်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ညီမအင်္ဂလိပ်လို အကျွမ်းဆုံး :P ကြုံကြွား)ဒါပေမယ့် ဒီမှာကျောင်းလာတက်တဲ့ အစ်ကိုတွေ၊ အစ်မတွေက အချင်းချင်းဆုံရင် တခါတလေ အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ပြောနေရော။ ကိုယ့်မှာနေ့တိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေရတဲ့ကြားထဲ။
တစ်ခါတုန်းက သာသနာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မျိုးညွန့် ကို တစ်ခါက ဦးခင်ညွန့် က အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခိုင်းတယ်တဲ့။
ထမင်းစားပွဲ တခုမှာ ခင်ညွန့် က မျိုးညွန့် ကို မေးတယ်တဲ့။
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖြစ်ရဲ့ လားလို့ ။
မျိုးညွန့် ကလည်း လေ့လာပါတယ် လေ့လာပါတယ်တဲ့။
ဒါဆို ထမင်းစားပြီးပြီလားလို့ မေးလာရင် ဘိုလို ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတော့
မျိုးညွန့် က the end ပါ တဲ့။
Your blog has been featured in shweDarling.com’s Favourite Myanmar Blogs I: http://www.shwedarling.com/blog/2009/03/29/shwedarlingcoms-favourite-myanmar-blogs-i/
goat wind,goat play..:)
goat down နေသေးလား..ဟားဟား
ကျနော့ရဲ့ cat mountain mountain ဘလော့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အစ်ကလည်း ရက်စက်လိုက်တာ i hate you so much တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ကွယ်။
ပုံရိပ်လည်း အင်္ဂလိပ်မှုတ်စရာ မလိုရင် မမှုတ်ချင်ပါ။ ဗမာစကား ပြောရတာမှ အားရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် အတင်းပြောတဲ့ အချိန်မှာ ဟီး။
Goat Wind တို့ Goat Play တို့ကို ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတဲ့ ရယ်စရာ တစ်ခု ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် သတိရမိသေးတယ်။
One day, လေကြီးမိုးကြီး အုန်းဒိုင်း
မဟာဇနက္က Dive ထိုး
On to the ocean
ယက်ကန်ယက်ကန် Seven days
မဏိ မေခလာ Come and save him ဆိုတာလေ။ :P
(Account မှားဝင်လို့ အပေါ်က ကော်မန့်ကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ဆောရီး။)
အစ်မရေ .. မနှင်းတို့မစံတို့.. မအေး တို့ တွေ အကြောင်း ရေးပါဦး ဗျို့... ဖတ်ချင်လို့... :)
အမစာလေးဖတ်ပြီး ပျော်သွားတယ် .. ညီမက အခု goat dirty နေတား( :P
မမချိုသင်း.... ကိုအကြော်ကို စိတ်မဆိုးတဲ့အချိန် ကျတော့ two body tiger စကားလေးတွေ ပြောတယ်မဟုတ်လား....ငှဲငှဲ..။
တစ်နေ့က အသိရဲ့သားလေးအိမ်လာလည်လို့ အအေးတိုက်တာသူကပြန်ပြောတယ်.."တော်ပြီအန်တီ၊ သားဗိုက်ပူနေပြီ"တဲ့ ၊ဗိုက်တင်းနေပြီ ကို သူမေ့သွားတာ
စင်္ကာပူမှာ ဆေးလာပြတဲ့အသိတစ်ယောက် နားထဲကလေထွက်တာကို မပြောတတ်လို့ သူ့သူငယ်ချင်းကိုလှမ်းမေးတာ.. ဟိုကနောက်ပြီး air from ear out လို့ပြောလိုက်တာကို အဟုတ်မှတ်ပြီးပြောလိုက်တော့ ဆရာဝန်မျက်စိတွေလည်သွားရောတဲ့..
ကြည့်ရတာ ကွန်ပျူတာ ပြန်ကောင်း သွားတဲ့ ပုံပဲ။
ရုံးက တရုတ်တွေလည်း သူတို့စကားကို တိုက်ရိုက်ပြန်ပါတယ်။
တရုတ်မှာ ပုစန်းပုစွတ် (ပု=မဟုတ် စန်း=၃ စွတ်=၄) ဆိုတာ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကို ဆိုလိုတာပါ။
အဲဒါကို သူတို့က မအင်္ဂလိပ်လို No Three No Four လို့ပြောပါတယ် :D
ညလေးလဲ ဗမာလိုပဲပြော ချင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာပဲနေချင်တယ်။
ဗမာလိုပဲပြောရ တာ အားရတယ်။ သြော် ဘဝ..ဘဝ ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာနေရ တယ် တဲ့။
အစ်မချိုသင်းရေ ... အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသွားပါတယ်ရှင် ...း)
ချိုသင်းက စီဘော့စ် မထားတော့ ဒီမှာပဲလာရေးလိုက်တယ်။
သဘောထားတွေ ရေးခဲ့ ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။
milk ကို မကြည့်ဖူးဘူး။
လ္ဘက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အမျိုးတွေ ပိုင်တာဆိုရင် အဆိပ် တပုံကြီးပါလည်း ပါတယ်ပြောကြမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
အသည်းတို့ ကျောက်ကပ်တို့ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုမှတော့ မစားပါနဲ့ ချိုသင်းရယ်။ ပစ်လိုက်ပါတော့။
အမက အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးထွက်တယ်ဆို တော်တာပေါ့.. ဖတ်ရင်း ရီနေရတယ်.. ကျနော်လည်း မြန်မာလို ပြော မြန်မာလိုရေးရတာ ပိုကြိုက်တယ်.. ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာက ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ.. သူငယ်ချင်းတွေဆီကို အင်္ဂလိပ်လို မေးလ်ပို့မယ့်အတူတူ မြန်မာလို ခပ်မြန်မြန်ရိုက်ချလိုက်ရတာကို ပိုအားရတယ်.. အမရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးအသစ်တွေလည်း မှတ်သွားတယ်.. (goat wind, goat play.. :D)
အကိုကြီးတစ်ယောက် (desert fox) သူ့ မိန်းမ သွားဆေးခန်းပြတာ ... ဆရာဝန်က သွားချိုးရမလားလို့မေးတာကို ... သူကသွားဖာလိုက်ရမလားလို့ မေးတယ်ထင်လို့... ခေါင်းငြိမ့်လိုက်မိတာ ... မိန်းမဆီမှာ သွားတစ်ချောင်း အကြွေးတင်သွားတယ်။ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေလို့ ရေးလိုက်တာပါ။
အစ်မ စာလေးဖတ်ပြီး goat wind တာတွေပျောက် သွားတယ်။ :D
ကွန်ပြူတာကြီး ပြန်ကောင်းသွားရင် သိုင်းကွက်အသစ်တွေ ထုတ်သုံးပါတော့ခင်ဗျာ
အလည်ရောက် နောက်ကျတာ ဒီတခါတော့ ကောင်းသွားတယ်။ Comment တွေက သင်ကြားထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေပါ မှတ်သားသွားရလို့လေ...
စကားမစပ် ချိုသင်း ကွန်ပျူတာ အသစ်ရပြီလား...
ပို့ စ် အသစ်လေးတွေ မျှော်နေတယ် အစ်မ ချိုသင်းရေ။း-)
အစ်မ ပုံပြောကောင်းတာနဲ့ အစ်မ အမျိုးသားကတော့ ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်မှန်းမသိတဲ့ ညတွေချည်းပဲနေမှာ ... :P
ချိုသင်းကတော့ လုပ်ပြီ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို နိုင်ငံမှာ နေ့ တဓူဝပြောဆို အလုပ်လုပ်နိုင်တာကိုက တော်လို့ ပဲ မဟုတ်လား ချိုသင်းရေ…
သားကိုတော့ ဗမာစကား မတတ်မှာ အတော်ကြောက်တယ် ချိုသင်းရေ… ဒါကြောင့် အိမ်မှာ ဗမာလိုပဲ ပြောတယ်… ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်ကလဲ သိပ်မကောင်းဆိုတော့ သားကို အမှားတွေတတ်သွားမှာ ကြောက်တာကလဲ တကြောင်းပေါ့…
သားကကျတော့ တခါတလေ မြန်မာလိုကို စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပြောတတ်လို့ရယ်ရသေးတယ်…
ချိုသင်းတို့၂ယောက်ကတော့ ၂ယောက်ထဲနဲ့ ကို ပျော်စရာကောင်းနေတာပါ… ချိုသင်းကိုယ်တိုင်က အိမ်ဆွဲလည်း ဖြစ်နေတာကိုး….
(ဟိုက်… တို့ကော်မန့် က ၅၅ ယောက်မြောက်ပါလားချိုသင်းရေ)
Want to say said...
စာလေးတွေ ဖတ်ရတာ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့ မအားတဲ့ ကျားထဲက ရောက်ဖြစ်နေတယ်
သုတေသနတောင် လုပ်ထားပါပေါ့လား မချိုသင်းအမျိုးသားက ..
ဘာသာစကားကတော့ ကျနော်လည်း ညံ့တယ်..
စကားပြောရမယ်ဆိုရင် ဗမာလို ပြောဆိုတာတောင်မှ တစ်နေ့လုံးနေလို့ သုံးလေးခွန်းထွက်တာ..